Vlogging အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အင်္ဂါရပ်များပါရှိသော HONOR 50 စမတ်ဖုန်း
17 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 5
အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ကြီးသော အစီအစဉ်များကို အားဖြည့်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာအမှတ်တံဆိပ် HONOR သည် ၎င်း၏ပထမဆုံး vlogging စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့် HONOR 50 ကို United Arab Emirates တွင် ယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ HONOR 50 သည် GMS ပါ၀င်ပြီး Qualcomm ၏ SnapdragonTM 778G မိုဘိုင်းပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည့် ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တွင် ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပေါင်းစပ်ဗီဒီယိုများစွာ ရိုက်ကူးနိုင်သည့်မုဒ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ တစ်ကြိမ်တည်းတွင် အသုံးပြုသူများသည် vlogging အတွေ့အကြုံကို ပျော်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှင့် ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည့် မုဒ်ခြောက်ခုမှ ရွေးချယ်နိုင်စေပါသည်။
၎င်းနှင့်အတူ HONOR 50 တွင် 6.57-လက်မ 75° ကွေးညွတ်ထားသော OLED မျက်နှာပြင်ပါရှိကာ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်အတွေ့အကြုံကို လက်ထဲတွင် ပေးဆောင်ပေးကာ 66W SuperCharge နည်းပညာပါရှိကာ မိနစ် 70 အတွင်းဘက်ထရီအား 20% ကျော်အားသွင်းနိုင်ကာ ပါဝါပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထူးထူးခြားခြား 4300 mAh ဘက်ထရီ။ HONOR 50 သည် တောက်ပသောအရောင်ရွေးချယ်စရာများ - Frost Crystal၊ Emerald Green၊ HONOR Code နှင့် Midnight Black တို့ကို အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကို အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုသည့်အရာကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန်။
ရိုက်ကူးမှုတစ်ခုအတွက် Multi-Video ရိုက်ကူးမှုမုဒ်များ
ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များနှင့် ရှုထောင့်များမှ အကြောင်းအရာများကို ရိုက်ကူးရန် အသုံးပြုသူများကို ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေသဖြင့် အသုံးပြုသူများသည် ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုသည့် ဗီဒီယိုအများအပြားရိုက်ကူးသည့်မုဒ် ခြောက်ခုဖြင့် ကင်မရာများကြားတွင် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် သီးသန့်ထားရှိသော ထိပ်တန်းအဆင့်ရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည် . အကြောင်းအရာရိုက်ကူးရာတွင် ပိုမိုရွေးချယ်စရာများ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူများသည် အလှအပမုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်း၊ ဗီဒီယိုများမှ ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ရိုက်ကူးမှုအားလုံးတွင် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းပုံစံများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ Bluetooth မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကို ဗီဒီယိုရိုက်နေစဉ်အတွင်း ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖန်တီးသူများသည် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးစဉ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံလက်ခံမှုကို ရရှိနိုင်ပြီး အားစိုက်ထုတ်မှုမရှိဘဲ vlogging အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
HONOR 50 တွင် ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုသည့် ပေါင်းစပ်ဗီဒီယိုများစွာ ရိုက်ကူးနိုင်သည့်မုဒ် ခြောက်ခုပါရှိသည်။ တစ်ကြိမ်တည်းတွင်၊ အသုံးပြုသူများသည် vlogging အတွေ့အကြုံကို ပျော်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာနှင့် ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါမုဒ်ခြောက်ခုမှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ရှေ့မှနောက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း- အသုံးပြုသူများသည် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကို ရိုက်ကူးနေစဉ် အရှေ့နှင့် အနောက်ကင်မရာအကြား ပြောင်းနိုင်သည်။
Dual-View Recording (ရှေ့/နောက်)- အသုံးပြုသူများသည် ရှေ့ကင်မရာနှင့် အနောက်ပင်မကင်မရာနှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ Dual View သည် ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကို ဘေးချင်းယှဉ်ကာ ရိုက်ကူးထားသည်ကို ပြသသည်။
Dual-View မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အနောက်/အနောက်)- အသုံးပြုသူများသည် အနောက်ကင်မရာနှင့် wide-angle ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ပင်မကင်မရာသည် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေစဉ် 6x zoom ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသည်။ Dual View သည် ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကို ဘေးချင်းယှဉ်ကာ ရိုက်ကူးထားသည်ကို ပြသသည်။
ရုပ်ပုံထဲရှိရုပ်ပုံ: ဤမုဒ်သည် အသုံးပြုသူများအား အရှေ့ကင်မရာ၏ မြင်ကွင်းကို အနောက်ကင်မရာ၏ ပိုကြီးသောမြင်ကွင်းသို့ ထပ်ဆင့်နိုင်စေသည် သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ခွင့်ပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည် အကြောင်းအရာပေါ်တွင် ပရိသတ်ကို အာရုံစိုက်စေလိုသော်လည်း မှတ်တမ်းတင်သူကို မြင်ခွင့်ပေးပါက အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။
အမြန်-Motion Recording & Slow-Motion Recording- ဤမုဒ်သည် အသုံးပြုသူများအား အရာဝတ္တုအား သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား အနှေး သို့မဟုတ် အမြန်-ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်စေပြီး ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအတွက် အေးမြပြီး ထူးခြားသောအလွှာကို ဖန်တီးပေးသည်။
Single မှ Dual -View Recording- အသုံးပြုသူများသည် ရိုက်ကူးနေစဉ်တွင် ကင်မရာတစ်လုံးတည်းဖြင့် ရိုက်ကူးခြင်းမှ ကင်မရာနှစ်ခုသို့ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Ultimate Vlogging Experience အတွက် ပြိုင်ဘက်မရှိ ကင်မရာစနစ်
ဗီဒီယိုတိုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လူငယ်များသည် ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်အခိုက်အတန့်များကို မှတ်တမ်းတင်ကာ ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကမ္ဘာနှင့် မျှဝေရန် vlog ကို တိုးလာကြသည်။ HONOR 50 သည် တစ်ကြိမ်သုံး vlog ရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံကို နောက်တစ်ဆင့်သို့ ယူဆောင်လာပါသည်။
32MP ရှေ့ကင်မရာကို 90 ဒီဂရီကြည့်ရှုနိုင်သော ထောင့်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုသူများသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဆယ်လ်ဖီများနှင့် ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ယူနိုင်ပြီး ဘေးဘောင်အတွင်းမှ လူများနှင့် မြင်ကွင်းများကို ပိုမိုရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောဘက်ကင်မရာလေးလုံးတပ်ဆင်မှုအားကြွားလုံးထုတ်ထားပြီး HONOR 50 တွင် 108MP ပင်မကင်မရာ၊ 8MP မြင်ကွင်းကျယ်ကင်မရာ၊ 2MP Macro ကင်မရာနှင့် 2MP Depth ကင်မရာတို့ ပါဝင်ပြီး သုံးစွဲသူများအား အလွန်ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ညဘက်၌ပင် လှပသောအသေးစိတ်။
ဘတ် လူကြိုက်များသော Tech မှပါဝင်သောထိပ်တန်း Notch ဖျော်ဖြေရေး
နှစ်မြှုပ်၍ သက်တောင့်သက်သာ ကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံအတွက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် မျက်နှာပြင်
HONOR 50 တွင် 6.57-inch 75-degree curved OLED screen ပါရှိပြီး Full High-Definition resolution 2340×1080 ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ မျက်နှာပြင်သည် ကြီးမားသောအရောင်အသွေး 1.07 ဘီလီယံကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး DCI-P100 ၏ 3% အရောင်အကွာအဝေးကို ဖုံးအုပ်ပေးကာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ပုံရိပ်များ၊ ပြတ်သားပြတ်သားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်အရောင်အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
HONOR 50 တွင် မျက်နှာပြင်ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း 120Hz အထိနှင့် ထိတွေ့နမူနာနှုန်း 300Hz ပါ၀င်ပြီး ကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် မြင့်မားသောစခရင်တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းများကို ကတိပြုပေးပါသည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော တက်ကြွလန်းဆန်းမှုနှုန်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုကို သက်သာစေသည်။
အမြန်အားသွင်းနိုင်စွမ်းနှင့် မြန်ဆန်သော ပရိုဆက်ဆာဖြင့် ပါဝါမြှင့်တင်ပါ။
single-cell dual-circuit ဘက်ထရီ ဒီဇိုင်းပါရှိသော HONOR 50 သည် ၎င်း၏ 4,300mAh ဘက်ထရီဖြင့် တစ်နေကုန် အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းတွင် 66W HONOR SuperCharge နည်းပညာပါရှိပြီး ပါ၀င်သောအားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြု၍ မိနစ် 70 အတွင်း ဘက်ထရီ 20% အထိ အားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးအထိ မြှင့်တင်ပေးသည့်အနေဖြင့် HONOR 50 သည် Qualcomm Snapdragon 778G 5G ချစ်ပ်ဆက်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး CPU နှင့် GPU စွမ်းဆောင်ရည် 45% နှင့် AI လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 123% တို့ကို ယခင်မျိုးဆက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ တစ်မူထူးခြားသော ဂရပ်ဖစ်အရှိန်မြှင့်နည်းပညာဖြစ်သော GPU Turbo X ဖြင့် မောင်းနှင်ထားသည့် HONOR 50 သည် ပြင်းထန်သောဂိမ်းကစားနေစဉ်အတွင်းပင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။
သာလွန်ကောင်းမွန်သောလက်ရာနှင့် Dual Ring Camera ဒီဇိုင်း
နောက်ဆုံးပေါ် ဒီဇိုင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် ပရီမီယံနှင့် တစ်မူထူးခြားသော အလှဗေဒကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် HONOR 50 တွင် အရှေ့ဘက်တွင် အလွန်ပါးလွှာသော bezel နှင့် မျက်နှာပြင်အပေါ်ဘက်နှင့် အောက်ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် 2.5D polishing glass edges ပါရှိပြီး သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ အမြင်အာရုံနှင့်လက်၌တွေ့ကြုံခံစားပါ။
HONOR 50 သည် မတူညီသောထောင့်များတွင် အလင်းရောင်နှင့် စောင်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် တောက်ပပြီး တောက်ပနေကာ မည်သည့်ဝတ်စုံနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော ဖက်ရှင်ကြေညာချက်ဖြစ်လာသည်။
ထူးထူးခြားခြား လှည့်ပတ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက် Magic UI 4.2
ချောမွေ့ပြီး အဆင်ပြေသော အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် HONOR 50 တွင် အဆင့်မြှင့်ထားသော Magic UI 4.2 ပါ၀င်ပြီး သုံးစွဲသူများကို အမြဲချိတ်ဆက်နေနိုင်စေမည့် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်အစုံကို ပေးဆောင်ထားသည်။
သုံးစွဲသူများအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၊ ပျော်စရာကောင်းပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော UX အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးခြင်း၊ HONOR 50 တွင် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ Always-on-Display (AOD) ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေမည့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ခေတ်မီအနုပညာအမြောက်အများလည်း ပါဝင်သည်။
အရောင်၊ ဈေးနှုန်းနှင့် ရရှိနိုင်မှု
ယနေ့ခေတ်၏ ပိုင်းခြားသိသာထင်ရှားသော ဖက်ရှင်ရှိသူများ၏ ပြောင်းလဲလာသော အရသာများနှင့် ကိုက်ညီရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် HONOR 50 သည် သမားရိုးကျအရောင်များထက် ကျော်လွန်ပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ဖက်ရှင်ရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့် ရရှိနိုင်သော Frost Crystal၊ နှင်းပုံဆောင်ခဲများဖြင့် မှုတ်သွင်းထားပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော စိန်နှင့်တူသော အချောထည်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ . HONOR 50 သည် ခမ်းနားသောမြစိမ်းရောင်၊ HONOR ကုဒ်နှင့် အချိန်မကုန်နိုင်သော Midnight Black တို့နှင့်လည်း ပါရှိသည်။
HONOR 50 ကို Sharaf DG၊ Emax၊ Carrefour၊ Jumbo၊ Ecity၊ Amazon၊ Noon နှင့် အခြားသော အော့ဖ်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များမှ နိုဝင်ဘာလ 16 ရက်နေ့တွင် ကြိုတင်မှာယူရန်အတွက် UAE စျေးကွက်တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 1999GB+8GB ဗားရှင်းအတွက် AED 256 နှင့် 1699GB+6GB ဗားရှင်းအတွက် AED 128 နှင့် အခမဲ့ HONOR MagicWatch2နှင့် VIP ဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် AED 699 တန်ဖိုးရှိသော အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းလာမည်ဖြစ်သည်။ စတင်ရောင်းချချိန်အတွင်း HONOR 50၊ Lite ကို ထိုနေ့တွင်ပင် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
HONOR 50 Lite သည် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို လွန်စွာတိုးမြှင့်ပေးသည့် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် သုံးစွဲသူများကို နှစ်သက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ အမြန်ဖြည့်သွင်းရန်အတွက် 66W HONOR SuperCharge၊ 6.67လက်မ FullView Display နှင့် 64MP Quad Camera တို့ပါရှိသည်။
HONOR 50 Lite ကို Deep Sea Blue၊ Space Silver နှင့် Midnight Black တို့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ AED 999 ဖြင့် ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီး AED 109 တန်ဖိုးရှိ HONOR Sport Bluetooth နားကြပ်များ လက်ဆောင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော BOSE သည် SMART SOUNDBAR 900 ကို မိတ်ဆက်သည်။
နောက်တစ်ခု Huawei သည် စူပါစက်ပစ္စည်းစမတ်ရုံးထုတ်ကုန်များကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။